Wednesday March 13, 2019 - 10:43:35 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Bayaan rasmi ah oo kasoo baxay Taliban ayay ku sheegtay in wadahadalladii ka socday magaalada Dooxa ee wadanka Qadar ay gaareen heer gaba gaba ah ayna suurtagal tahay in lagasoo saaro heshiis.
Sheekh Dabiixullaahi Mujaahid oo ah Afhayeenka imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa sheegay in horumar wanaagsan laga gaaray wadahadallo adag oo socday isbuucyadii lasoo dhaafay waxayna imaaradu yididiilo ka muujisay in jadwal cayiman loo dajin doono bixitaanka ciidamada Mareykanka heshiis xabad joojin ahna lagu dhawaaqi doono.
Talibaan qodobada ay miiska soo dhigtay dhammaantood waxaa aqbalay Ergayga Mareykanka uqaabilsan wadanka Afghanistan ninka lagu magacaabo Zalmaay Khaliil Zaad, Mareykanka ayaa dhankiisa doonaya in marka ciidamadiisu Afghanistan isaga baxayaan aan dhabarka laga toogan islamarkaana Taliban aysan soo abaabulin weeraro ka dhan ah danaha Mareykanka ee mandiqadda.
Ilo wareedyo diblumaasiyadeed ayaa wargeyska New York Times u sheegay in dabayaaqada bishan March 2018 lasoo gaba gabayn doono wadahadallada islamarkaana Taliban iyo Mareykanka ay heshiis wada saxiixan doonaan balse wufuudda labada dhinac ayaa dib ugu kala laabanaya wadamadooda si ay latashiyo ulasoo sameeyaan madaxdooda.
Waxaa xusid mudan in Taliban ay ganafka ku dhufatay in wadahadal ay lagasho xukuumadda Afghanistan oo ay u taqaan xukuumad camiil ah oo aan mudneyn in lala hadlo taas bedelkeedna waxay sheegtay in ay xabaddu kusii socan doonto wadankana ay kala wareegayso.
Mareykanka ayaa doonaya in mar uun uusoo gaba gabeeyo duullaanka waqtiga dheer qaatay ee Afghanistan ka socdo kaas oo si xun ciidamadiisa loogu dhiig bixiyay muddo 18 sanadood oo xiriir ah waana dagaalkii ugu waqtiga dheeraa ee abid mareykanku galo.